Ciidamada Mujaahidiinta oo Lawareegay Gacan Ku Heynta Deegaanka Qurac Joome ee gobolka Bakool.
Wednesday August 20, 2014 - 13:42:45 in Wararka by Super Admin
Boqolaal katirsan ciidamada mujaahidiinta Soomaaliya ayaa gudaha ugalay deegaanka Qurac Joome ee dhaca xadbeenaadka kala qeybiyo gobolka Bakool iyo dhulka Soomaalgalbeed ee Itoobiya gumaysato.
Wararka ka imaanaya Bakool ayaa sheegaya in ciidamada mujaahidiinta oo wata gaadiidka dagaalka ay dhowr jiho ka galeen deegaanka kadib markii ay isaga firxadeen maleeshiyaadka Liyuu booliska ee dowladda Itoobiya taabacsan.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in calanka Madoow ee dhaxda ku leh Towxiidka laga lalmiyay bartamaha deegaanka Qurac joome waxaana la dejiyay calanka dowladda Gumeysiga Itoobiya iyo midka maamulka Jigjiga.
Saraakiil katirsan ciidanka shabaabul Mujaahidiin ayaa shacabka meel fagaara ah kala hadlay waxayna ku baaqeen in dadku isdejiyaan wararka ayaa intaasi ku daraya in agabyo muhiim ah oo cadawgu lahaa ay qabsadeen ciidamada mujaahidinta ee deegaanka Lawareegay.
Dhawaan ayay aheyd markii ciidamada muslimiintu isku fidiyeen deegaanno ay kamid yihiin Garasweyne Laheloow iyo lagala oo dhammaantood kulaala dhanka xadbeenaadka ay wadaagaan Bakool iyo dhulka Itoobiya gumeysato.